Quburo ka socota Jaamacadda Carabta oo bogaadisay sida ay u shaqayso hay’adda duulista Hawada Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Quburo ka socota Jaamacadda Carabta oo bogaadisay sida ay u shaqayso hay’adda...
Quburo ka socota Jaamacadda Carabta oo bogaadisay sida ay u shaqayso hay’adda duulista Hawada Soomaaliya
Muqdisho-(SNTV)-Xubno ka socday Ururka hay’adda duulista Rayidka ee Jaamacadda Carabta oo Muqdihso ku sugnaa Maalmahaan ayaa laga sagootiyay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cade International Airport.
Quburadan oo ka kooban Afar xubnood ayaa Muqdisho u yimid in ay qiimeyn ku sameeyaan maamulka Hawada Soomaaliya, si loo ogaado heerka jewiga guud ee Madaarka iyo sidii ay Gacan uga geysan lahaayeen tababarrada shaqaalaha iyo qalabaynta Garoomada Dalka.
Xubnahan ka socday Ururka hay’adda duulista Rayidka ee Jaamacadda Carabta, ayaa Afartii Cisho ee ay ku sugnaayeen Muqdisho waxay si weyn ugu kuur galeen shaqada ka socota Garoonka, iyagoo Dowladda Soomaaliya ku ammaanay sida ay u xoojineyso horumarinta adeegyada Caalamiga ah.
Maareeyaha hay’adda duulista Rayidka Soomaaliya, Axmed Macallin Xasan, ayaa sheegay in Jaamacadda Carabtu ay ka jawaabeen dalabkii Dowladda, isagoo intaa ku daray in ay soo dirtay Qubaro qiimeyn ku samaysa Garoonka, iyagoo u kuur galay shuruucda hay’adda duulista, wuxuuna sheegay in ay sameeyeen Dukumiintiyo qeexaya xogtii ay uruuriyeen.
Baarlamaanka Soomaaliya ayuu Maareeyuhu ka codsaday in ay dadejiyaan sharciga maamulka Hawada kaas oo wax ku ool u ah dhammaystirka qorshaha la wareegista Hawada Dalkeenna oo maraya heerkii ugu dambeeyay.
Previous articleWasiirka ganacsiga Soomaaliya oo ka warbixiyay Safar uu dhowaan ku tagay Shiinaha
Next articleR/Wasaare Khayre: “Dhamaystirka dhismaha Galmudug waxay fursad inoo siineysaa dhameystirka dagaalka aan kula jirno khawaarijta”